Waa kee xidigga uu Robert Pires ugu baaqay Arsenal inay xagaagan soo iibsato? – Gool FM
Waa kee xidigga uu Robert Pires ugu baaqay Arsenal inay xagaagan soo iibsato?
(London) 02 Maarso 2019. Weeraryahankii hore ee kooxda Arsenal Robert Pires ayaa ugu baaqay maamulka naadiga Arsenal inay isku dayaan in xagaaggani ay la soo wareegaan xidigga garabka uga dheela Real Madrid Gareth Bale.
Ciyaaryahan Bale ayaa 13 gool u dhaliyay Real Madrid kulammadii uu dheelay xilli ciyaareedkan, inkastoo ay isugu darsameen dhaawacyo iyo heerkiisa ciyaareed oo hoos u dhacay.
Madrid ayaa u muuqata mid iska iibinaysa Bale dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana laacibkii hore ee Faransiiska Pires uu ugu baaqay Arsenal inay fursaddani ka faa’iideysato.
“Waxaan aaminsanahay in ay tahay fursad fiican, waxay u muuqataa in Bale uu ku jiro xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay ee Real Madrid” ayuu Pires u sheegay bwin.
“xilli adag ayuu marayaa gudaha garoonka iyo dibaddiisaba, waxaad arki kartaa in waqti xaadirkan uusan faraxsanayn, waxaana u malaynayaa in dib ugu soo laabashadiisa Ingiriiska ay noqonayso tallaabo macquul ah, waxaa jira warar sheegaya in uu dib ugu laaban doono Tottenham, laakiin waxaan ugu baaqayaa Arsenal inay albaabada Emirates u furan Bale” ayuu sii raaciyay Pires.
Bale oo 29 jir ah waxa uu Real Madrid yimid 2013 markaas oo uu ka soo tegay Tottenham, waxaana 221 kulan oo uu u dheelay uu u dhaliyay 101 gool.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Tottenham Hotspur Vs Arsenal